Garoon Diyaaradeed Oo Ay Maalintii Maamusho Dawlada Somaliya Habeenkiina Al-Shabaab Ay Maamusho, |
Garoon Diyaaradeed Oo Ay Maalintii Maamusho Dawlada Somaliya Habeenkiina Al-Shabaab Ay Maamusho,
Moqdisho (GNN):- Maamulka Degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan ayaa sharaxaad dheeri ah ka bixiyay amaanka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi oo maalmahaan qaraxyo ay ka dhex dhacayeen.
Gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee Gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Muxumed Taakoy ayaa isaga oo la hadlay VOA wuxuu sheegay in ciidamada Al Shabaab ay habeenkii ay maamulaan garoonka diyaaradaha maalintiina ciidamada Jabuuti, sida uu hadalka u dhigay.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in Al Shabaab ay waxyaabaha qarxa ku aaseen garoonka diyaaradaha iyo agagaarkiisa, waxaana mid kamid ah miinooyinkaasi ku dhintay askari ka mid ah ciidamada Jabuuti.
Isaga oo ka hadlay dhinaca amaanka ayuu sheegay in Al Shabaab marar badan ay weeraro qorsheysan ka geysteen degmada iyo deegaano dhowr ah oo hoostaga, maadaama hareeraha magaalada ay ku xoogan yihiin.
“Haddii aan warbixin ka bixiyo xaalada amaan, maanta waa wanaagsan tahay, shalay ayay qaraxyo garoonka geliyeen iyagii ayaana ku dhintay, haddana xaaladeena waa wanaagsan yahay”ayuu yidhi Guddoomiye ku xigeenka amniga.
Dhinaca kale Guddoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in Al Shabaab badan oo doonayay inay Zakawaad ka qaadan dadka deegaanka lagu laayay deegaanka Ceel-cadde oo hoostaga degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan.
Al Shabaab ayaa go’doomiyay muddo sanad ku dhow degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan, waxaana yar dhaqdhaqaaqa ganacsi ee degmadaasi.